Helicopter muIndia: Zvirinani kune Zvivakwa uye Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Helicopter muIndia: Zvirinani kune Zvivakwa uye Tourism
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • Investments • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Iyo nyowani 10-point Helicopter Policy, "Helicopter Accelerator Cell," yakaziviswa uye kumisikidzwa neIndia Ministry of Civil Aviation.
Maherikoputa anoita basa rakakosha mukusimudzira hupfumi uye chikamu chakakosha chevamiririri vezvemuchadenga.
Helicopter corridors inofanirwa kumisikidzwa mumaguta gumi ane makumi masere nemasere migwagwa, matanhatu akatsaurirwa, kutanga.
Helipads inofanirwa kumisikidzwa munzira dzekutenderera kuti ibatsire kubuda kwevanenge vakuvara nenjodzi ne3 Expressways yakazivikanwa.
VaJyotiraditya Scindia, Gurukota rezveVashandi veVanhu, nhasi vataura kuti pfungwa yeherikoputa haisi itsva muIndia, asi inoda kuwedzerwa nechimiro chinogonesa iyo indasitiri kuti ishande pamwe chete nehurumende kushandira vanhu. Helicopter inopinda munyika inoda kuve yekutanga, akadaro. Akawedzera kuti nzvimbo inofanirwa kupihwa iyo inobvumidza vashandisi kupa masevhisi avo mumweya werudzi rwechokwadi, uye pfungwa dzinofanira kuteverwa nekuita.
Kutaura kune 3rd FICCI Helicopter Summit ya2021, "[email inodzivirirwa]: Kuburitsa Kukura kweIndia Helicopter Indasitiri uye Kunatsiridza Mhepo Kubatana, "VaScindia vakazivisa iyo nyowani-nhanho Helicopter Policy. Vachitaura nezvegwara iri, VaScindia vakaona kuti Helicopter Accelerator Cell yakamisikidzwa yakagadzwa nebazi rezveVashandi veAviation iyo ichatarisa nyaya dzese dzeindasitiri muchikamu ichi.
Zvakare, Gurukota rakazivisa kuti sechikamu chemutemo uyu, mari dzese dzekumhara dzichamiswa uye nzvimbo dzekupaka dzichadzoserwa. “Tichava chishandiso chaungashandise kufambisa kukura kwako. Nhanho yechitatu yemutemo uyu ichaona kuti vakuru veAAI neATC vanosvika kune indasitiri kuitira kuti tigone kuona kuti dzidziso dzakakwana dzinopihwa kuvanhu vese nezvenyaya dzeherikoputa, ”vakadaro.
Kuitira kurerutsa kuita bhizinesi, Gurukota rakazivisa kuti boka rezano rakaumbwa pamaherikoputa. “Maitiro ekurwadziwa neindasitiri anozogadziriswa [kumunyori] kana padanho rangu. Nyaya dzemitemo nemirau yechinyakare zvichatarisirwa, ”vakadaro.
VaScindia vakawedzera kuti 4 Heli Hub uye maYuniti Ekudzidzisa achagadzwa muMumbai, Guwahati, Delhi, uye Bangalore. Akataura zvakare kuti Helicopter Corridors ichagadzwa mumaguta gumi ane nzira dze10. Ministry parizvino ichatanga kushanda munzira nhanhatu dzakatsaurirwa kutanga nadzo. Migwagwa mikuru inozivikanwa ndeyeJuhu-Pune, Pune- Juhu, Mahalaxmi Racecourse - Pune, Pune - Mahalaxmi Racecourse, Gandhinagar - Ahmedabad, uye Ahmedabad - Gandhinagar.
VaScindia vakataura zvakare kuti maHelipads achamisikidzwa munzira dzinoonekwa kuitira kuti kubvisa kwevanenge vawirwa netsaona kuitike nekukasira. "Iyo Delhi-Bombay Expressway, Ambala-Kotputli Expressway, uye Amritsar - Bathinda - Jamnagar Expressway ichave chikamu cheedu HEMS (Helicopter Emergency Services)," Gurukota rakawedzera.
Heli-Disha, kabhuku ke Administrative Guidance Material pane Civil Helicopter Operations, iyo yakaburitswa pachiitiko ichi, ichapihwa kune wese mutori mudunhu rega rega renyika, Gurukota rakazivisa. Izvi zvichave nechokwadi chekuti ruzivo rwunogadzirwa kuhutongi hwedunhu, akawedzera.
A centralized Heli Seva portal yakavhurwa pachiitiko ichi sechikamu cheiyo nyowani Helicopter Policy. Mepu yemugwagwa weHeli Emergency Medical Services (HEMS) yakaburitswa pachiitiko ichi.
General (Dr.) VK Singh (Retd.), Gurukota reHurumende, Ministry of Civil Aviation, uye Gurukota reHurumende, Ministry of Road, Transport and Highways, Hurumende yeIndia, vakati maherikoputa ane zvavanoshandisa. Kuchengetedza kwavo uye kugadzirisa, zvisinei, kunodhura uye nekudaro kwave kushandiswa kushoma kune vafambi traffic. “Tinovimba kuti tichakwanisa kudzikisa mari pazvinhu zvinoda mari uye kuti ive neupfumi. Ichi chikamu chinoda kukurudzirwa uye chinoda kuenda kwakanyanya maererano nezvachinogona kushandiswa, ”akawedzera.
VaPushkar Singh Dhami, Gurukota guru, Hurumende ye Uttarakhand, vakati Uttarakhand inoenderana nekushanya kwehupfumi hwayo, iyo inoda kubatana kwakanyanya. "Tinotarisa kuherikoputa [s] yekubatanidza vanhu Tiri kuyedza kugadzira helikopta [s] mota yevanhuwo zvavo uye tinonanga kupa rubatsiro rwakanaka kana zvasvika kumaherikoputa," akadaro.
VaSatpal Singh Mahara, Gurukota rezveKushanya, Kudiridza, Tsika, uye Sachigaro, Uttarakhand Tourism Development Board, vakati mukuedza kusimudzira kubatana, hurumende iri kuyedza nzira dzendege kuti dzimhara kuNanak Sagar. “Izvi zvichabatsira mukuvaka kubatana. Nyika inovavarira kuve mupi webasa. "Tinokumbirawo International Airport kuvakwa kuHaridwar," akadaro.
Ms Usha Padhee, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Hurumende yeIndia, Helicopter, vakanyora huwandu hwezvirongwa zvakatorwa nebazi reCivil Aviation. “Helicopter Accelerator Cell ichaenda kunopa mukana kune vese vanobatsirana mumaindasitiri kuti vashande vari tandem nekubatana nehurumende. Vachitaura nezvaHeli Sewa, Mai Padhee vakati saiti iyi ichave inoshandura mutambo sezvo vachiramba vachishandisa uye vachifumisa zvirimo. "Saiti iyi zvinoenderana nechikumbiro chevashandisi, uye tinotarisira kuti kubvumidzwa kwemaherikoputa kunoitika nekukasira," akawedzera.
VaDilip Jawalkar, CEO, Uttarakhand Tourism Development Board, vakati basa reherikoputa rakakosha zvakanyanya kunyanya kunzvimbo dziri kure uye dzine makomo seUttarakhand. Heli matekisi anowedzera chiyero chekubatanidzwa, kunyanya kune vakuru vakuru, vana uye neakasiyana mabhedhi. Helikopta inopa inokurumidza nzira yekubatanidza kunzvimbo dziri kure uye dzisingasvikike uye inoita chinzvimbo chakakura mukugadzirisa njodzi uye mabasa ekununura mudunhu.
VaSanjeev Kumar, Sachigaro, Airport Airport yeIndia, vakati maherikoputa anoita basa rakakosha mukusimudzira hupfumi uye chikamu chakakosha che civil avhiyesheni mararamiro.
Dr. RK Tyagi, Sachigaro, FICCI General Aviation Taskforce, uye Aimbova Sachigaro, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), uye Pawan Hans Helicopters Limited (PHHL), akadaro India nhasi ine simba rengarava re236 maherikoputa ayo akapatsanurwa pakati pevashandisi 73. “Iri indasitiri yakakamurwa zvikuru ine vashandisi vatatu chete vane maherikoputa anodarika gumi. India inofanira kunge iine maherikoputa anodarika zviuru zvishanu ane huwandu hwakanaka hwaakatsaurirwa mabasa ekurapa echimbichimbi, uye mutemo uye kurongeka, ”akadaro.
VaRemi Maillard, Sachigaro, FICCI Civil Aviation Committee, uye Mutungamiriri uye MD, Airbus India, vakati chimiro cheIndia nekupararira kwevanhu zvinoita kuti ive nyika yakanaka yeherikoputa. “Helicopter chikamu chakasimukira mune hupfumi hwenyika, asi musika weherikoputa uri kudzikira muIndia. Maherikoputa achiri kutaridzirwa setoyi yekutamba yevapfumi. Hurumende nemaindasitiri vanoda [shanduko] kuti vachinje mafungiro emaherikoputa - kudzikamisa maherikoputa kuti ave chinzvimbo chinogamuchirwa, ”akadaro.
VaDilip Chenoy, Secretary General, FICCI, vakati indasitiri yekufambisa ndege muIndia yakabuda seimwe yeindasitiri inokura zvakanyanya munyika. "Helicopter inogona kutora chinzvimbo chakakosha mukusimudzira hupfumi, uye kukosha kwemaherikoputa kwakapetwa kaviri nekuda kwehunhu hwekushanda kweiyo rota hunyanzvi pamwe nekubata kwepasi pemamiriro akaderera emhepo," akawedzera.